BIOS ကိုက BOOT FLASH ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး: FIX ဖို့ကိုဘယ်လို - USB FLASH DRIVE ကို - 2019
, BIOS က boot flash ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာကို
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အတွက်အကောင့်တစ်ခုချင်းစီကိုပိုင်ရှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့အချိန်ကန့်သတ်ကာလအတွက်ကြောင့် restore လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူစာမျက်နှာ၏ယာယီ Deactivate အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
စာမကျြနှာ VK ၏ယာယီဖယ်ရှားရေး
ကျနော်တို့ပြီးသားခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေး link ကိုမှာကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်ရှိလူမှုရေးကွန်ရက် VKontakte သည်အခြားပစ္စည်းအတွက်အကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်ပစ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ သငျသညျပုံမှန်အပေါ် Deactivate စာမျက်နှာ၏နည်းလမ်းများစိတ်ဝင်စားလျှင်, သင်ကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအဆိုပါ VC ကို site ၏နှစ်ခုမူကွဲ၏ယာယီဖယ်ရှားရေးအပေါ်သာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Read more: သင့်အကောင့် VKontakte ဖျက်ပစ်ပါ
Method ကို 1: အပြည့်အဝဗားရှင်း
website တစ်ခု VC ကိုတစ်အပြည့်အဝဗားရှင်းသုံးစွဲဖို့အရှိဆုံးအဆင်ပြေသည်နှင့်အခွင့်အလမ်းများအကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အရေအတွက်အားပေးပါသည်။ ဤစာမကျြနှာ settings ကိုတစ်ကဏ္ဍကိုတဆင့်အကောင့်များ၏ Deactivate ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဆိုက် VKontakte သွားပြီးမည်သည့်စာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်တွင်, main menu ကိုချဲ့ထွင်။ ဒီစာရင်းထဲကနေ, သင်ရွေးချယ်ရမည် "Settings" ကို.
သွားလာမှု menu ကိုတဆင့်ပထမဦးဆုံးထိပ်တန်း tab ကို click လုပ်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှာပါနဲ့ link ကို click နှိပ်ပြီး "ကိုဖျက်".
လာမယ့်ပြတင်းပေါက်၌အမြစ်အကြောင်းမရှိနှင့်တစ်ဦးကို tick တည်ထောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းများအတွက်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည် "မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုပြောပြပါ" ရုပ်ရှင်အခြားအသုံးပြုသူများအတွက်ဖယ်ရှားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျထုတ်ဝြေခင်းဖြစ်သည်။
နှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက် "ကိုဖျက်"သင်ကပြတင်းပေါက်ဆီသို့ပါလိမ့်မည် "စာမျက်နှာကိုဖျက်မည်".
ဤဆောင်းပါး၏ဆောင်ပုဒ်ပေးနာလန်ထူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ။ ဒါဟာဖယ်ရှားရေးသည့် နေ့မှစ. နောက်တဖန်မခြောက်လထက်လအတွင်းများအတွက်သက်ဆိုင်ရာ link ကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ account ကို access ကို restore လုပ်ဖို့အချိန်မမှန်လျှင်အစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်လိမ့်မည်။ ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုရယူသုံးလျှင်ပင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကပြန်လှည့်မည်မဟုတ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: တစ်စာမျက်နှာ VK Restoring
Method ကို 2: မိုဘိုင်းလ်ဗားရှင်း
ဆိုက် VKontakte အပြည့်အဝဗားရှင်းမဆိုစက်ပေါ်ရှိအသီးအသီးအသုံးပြုသူအပြင်ကလည်းစမတ်ဖုန်းများအတွက်အဆင်ပြေအောင်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောအပြောင်းအလဲ, ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း device ကိုမဟုတျဘဲကွန်ပျူတာကနေလူမှုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုရန်ပိုနှစ်သက်လျှင်, ဆောင်းပါး၏ဤအပိုင်း၌ယာယီစာမျက်နှာဖယ်ရှားခြင်း၏နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာကြည့်ရှုမည်။
မှတ်ချက်: တရားဝင်မိုဘိုင်း app လက်ရှိစာမျက်နှာ၏ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်ခွင့်ပြုမထားဘူး။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏ဖုန်းကို VK ကနေစာမျက်နှာဖျက်ခြင်း
မိုဘိုင်း device များအတွက်မည်သည့် web browser ကိုခုနှစ်တွင်အောက်တွင်ပေးထားသောလင့်ခ်ကိုသွားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, လိပ်စာဘားထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအတည်ပြုပါ။
အပြည့်အဝဗားရှင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်သင့်အကောင့်ကနေဒေတာတွေကိုဝင်နှင့် button ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် "ဝင်မည်"။ သင်တို့သည်လည်း Google ကသို့မဟုတ် Facebook ကနေတဆင့် login နှုနျးနိုငျသညျ။
မျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိ icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် menu ကို Expand ။
ရန် scroll နှင့်နောက်ဆုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို select "Settings" ကို.
နောက်တဖန် contents တွေကို link ကိုနှိမ့်ချ scroll နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုဖျက်".
ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်မှုသည် profile ကိုနှင့် optional ကိုကို tick ဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ကို select "မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုပြောပြပါ"။ သင့်အကောင့် deactivate စေရန်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စာမျက်နှာကိုဖျက်မည်".
ထိုအခါသင်သည် Deactivate တစ်အသိပေးစာနှင့်အတူတစ် box ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ။ တစ်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ link တစ်ခုပေးပါသည် "သင်၏စာမျက်နှာ Restore".
မှတ်ချက်: Recovery ကိုအတည်ပြုချက်အသိပေးစာလိုအပ်သည်။
သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုမေးမြန်းဖို့နောက်ဆက်တွဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးစာမျက်နှာ၏ယာယီ Deactivate အကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများရှိပါက။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေညာချက်နိဂုံးခြုပျကျနော်တို့တာဝန်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအကောင်းကံအလိုရှိ၏။
ဗီဒီယို Watch: How to boot Asus Labtop from USB drive or CD-ROM (နိုဝင်ဘာလ 2019).